China Isitolo esidayisa yonke impahla Imbali Itiye Khohlwa-Mina-Hhayi Ukwakha futhi Factory | Bestop
Igama lesiShayina: wu wang wo
Igama lesiNgisi: forget-me-not
Igama lesiLatin: Myosotis silvatica Ehrh. isb Hoffm.
Umsebenzi oyinhloko: Ukususa ukushisa nobuthi, ukusula inhliziyo nokwenza ngcono ukubona, ukondla i-yin nokuqinisa izinso
I-Myosotis sylvatica umuthi ongapheli wohlobo lwe-Myosotis ku-lithospermaceae. Amaqabunga awo ayashintshana, ahlukaniswe kancane noma ahlukaniswe. Izimbali zayo zixubaniswe ngokuluhlaza okwesibhakabhaka nendandatho yama-pistils aphuzi phakathi. Iyayithanda i-Yang, ingathwala i-Yin, futhi kulula ukuyisabalalisa ngokuzihlwanyela. Imbali incane futhi yinhle, ukufaniswa kombala kuyahambisana futhi kuheha iso, ikakhulukazi i-cymose kancane kancane iyahambisana nokuvulwa kwembali, ingxenye yayo iqukethe nengxenye yembula, ehehayo nengalibaleki. Izinsizwa nezintombi ziyaphana ungangikhohlwa ukuveza imizwa yazo ejulile.
Ukususa ukushisa nobuthi, ukusula inhliziyo nokuthuthukisa ukubona, ukondla i-yin nokuqinisa izinso.
Ifanele induna, i-furuncle, isikhumba esirhabaxa, ukungaboni kahle, ukuqunjelwa, umchamo omfushane ophuzi, njll. Futhi kungenza isikhumba sibe mhlophe, ukunakekelwa kwesikhumba nobuhle.
1. Ungakhohlwa itiye lobuhle: ungakhohlwa inani elifanele lembali, 1 ithisipuni itiye eliluhlaza, uju oluncane. Faka i-do not forget me flower and green tea enkomishini, phisa ngamanzi ashisayo, linda cishe imizuzu eyi-3, bese ufaka uju ngemuva kokuba imbali ungangikhohlwa isinambithile. Ingenza isikhumba sibe mhlophe futhi ilungele izinduna namabala.
2. Ungakhohlwa itiye le-Erhua: ungakhohlwa itiye le-Erhua netiye le-honeysuckle ngenani elifanayo, cwilisa emanzini noma usebenzise i-decoct emanzini, umthamo owodwa nsuku zonke. Ingasusa ukushisa nobuthi, futhi ifanele izingane ezinokushisa okushisa.
3. Ungakhohlwa itiye le-Xie Ye: ungakhohlwa ukuthi ngiyimbali, ngifaka i-pan Xie Ye ngamunye amagremu ayi-10, cwilisa isiphuzo, noma i-decoction, umthamo owodwa ngosuku. Kungasusa ukushisa futhi kuqede ukuqunjelwa. Kukufanele ukuqunjelwa.
4. Ungakhohlwa itiye le-rose: ungangikhohlwa imbali, uvule imbali ngayinye i-gramu ayi-10, isiphuzo se-bubble, noma i-decoction, umthamo owodwa ngosuku. Ifanele i-dysmenorrhea ne-dysmenorrhea.
5. Ungakhohlwa itiye le-chrysanthemum: ungakhohlwa imbali yami, i-chrysanthemum ngayinye amagremu ayi-10, cwilisa isiphuzo, noma i-decoction, umthamo owodwa ngosuku. Kungadambisa isibindi futhi kususe ukushisa. Ifanele umfutho wegazi ophezulu, isiyezi, ukungaboni kahle, njll.
6. Ungakhohlwa itiye leqabunga loqalo: ungakhohlwa imbali yami, amagremu ayi-10 e-cizhuye lilinye, cwilisa emanzini, noma gazinga emanzini, umthamo owodwa ngosuku. Ingasusa ukushisa futhi iqede izinhlungu.
7. Ungakhohlwa itiye lembewu ye-lotus: ungakhohlwa imbali yami, amagremu ayi-10 wembewu ye-lotus ngayinye, cwilisa emanzini, noma gazinga emanzini, umthamo owodwa ngosuku. Ingasusa ukushisa futhi isuse ukumanzisa. Ifanele i-spermatorrhea, i-dreamland njalonjalo.
cishe 10 g
Sika lapho izimbali eziningi zivuleka futhi zithuthukise umbala.
Ifanele imbali esikiwe entsha noma imbali eyomile.
Langaphambilini Itiye lembali leBurdock
Olandelayo: Itiye Lembali LeMarigold Eliphilile